Wholesale XJC-Y04 Compression Load Cell Kugadzira uye Fekitori | XJCSENSOR
XJC-Y04 Kudzvinyirira Load Cell
1. Dhayamita yekunze diki
2. TEDS akangwara calibration basa
3. Rudzi rwekumanikidza, mhinduro yakasimba
4. Mhanya-mune dhizaini dhizaini, hupenyu hwakareba hwebasa
5.Midziyo: Aluminium alloy (magnesium aluminium uye aviation aluminium) uye isina simbi simbi 17-4PH uye alloy simbi: 42CRMO, 40CR, 40CRMOA, nezvimwe.
6.Kumhanya-mune dhizaini dhizaini, kumanikidza mutoro, kuisirwa uye nyore kuisa;
7.Kachengeteka uye kuputika-chiratidzo mutoro sero, iyo inogona kushandiswa munzvimbo dzakaomarara uye nenjodzi mamiriro.
Sensor housing (elastic element, sensitive beam) inoburitsa deformation pasi pechiito chesimba rekunze, kuitira kuti iyo yekumanikidza strain gage (yekushandura chinhu) yakanamatira pamusoro payo zvakare deforms. Mushure mekudzvinyirira stage gage yakaremara, yayo yekudzivirira kukosha ichachinja (kuwedzera). Huru kana diki), uyezve shanduko yekudzivirira inoshandurwa kuita chiratidzo chemagetsi (magetsi kana zvazvino) nedunhu rekuyera rinoenderana, nekudaro kupedzisa maitiro ekushandura simba rekunze kuita chiratidzo chemagetsi.
1. Simba sosi renji yekutarisa michina yekushandisa.
2. Limit simba sosi renji kuti irege kunyanyisa kukwirira kana kudzika.
Chenjedzo pakusarudzwa kwemutoro wesero:
1. Iyo yakajairwa simba rekushandisa renji inofanirwa kuve inopfuura gumi muzana yeiyo yakazara chiyero cheiyo sensor, uye yakanaka mhedzisiro iri mukati me80%.
2. Iyo renji yesimba rinoshanda rekushandisa, iyo yakakwira kuburitsa kwemidziyo (kuburitswa kwema servo motors, ma cylinders, nezvimwewo) simba rekuwedzeredza rinofanira kutorwa mukufungisisa pamberi apo paunenge uchisarudza iyo sensor.
3. Kurongeka kweiyo sensor: Kurongeka kwakazara, kurongeka, kushandisa kudikanwa kwakaringana, dzokorora kururamisa, kururamisa kwakasimba uye static kurongeka, kuyera kurongeka, kudzora kurongeka, kurongeka kwehurongwa.
4. Kuisa nzira: sikuru kugadzirisa, kugadzirisa ndege, zvimiro zvekunze zvinodiwa: kureba, upamhi, kukwirira, dhayamita yekunze, nezvimwe.
5. Force nzira: Simba rekunongedzera, simba repamusoro, kuburikidza nesimba gomba, kuyera kwekupokana, kuyerwa kwekumanikidza, torque, nezvimwe.
Pashure: XJC-Y03-4M Kudzvinyirira Load Cell
Zvadaro: XJC-Y08 Kudzvinyirira Load Cell
XJC-ZX-B Kudzvinyirira Load Cell
XJC-Z-197 Kudzvinyirira Load Cell
XJC-Y03-4M Kudzvinyirira Load Cell
XJC-Z15-H9-2M Miniature bhatani simba chinzwa (1 -...